Xulka qaranka Soomaaliya oo isaga soo haray tartanka bariga iyo bartamaha Afrika kaddib barbaro ay la galeen Eritrea – Gool FM
Haaruun December 15, 2019
(Lugogo) 15 Dis 2019. Xulkeenna qaranka Soomaaliya ayaa isaga soo haray tartanka bariga iyo bartamaha Afrika kaddib markii ay barbaro goolal la’aan ah la soo galeen xulka Eritrea.
Kulankan ayay wiilasha Soomaaliya dardar ku bilowdeen, waxaana qeybta hore ay heleen fursado goolal loo filan karay, iyadoo ay ka beeniyeen goolhayaha iyo daafaca xulka Eritrea, sidaas ayaana lagu kala nastay 0-0, iyadoo xulkeenna Soomaaliya uu dhinac walba ku gacan sarreeyey.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay, balse xulkeennu ma ahayn sidii hore, waana laga fiicnaa qeybta labaad, si kastaba kulanka ayaa ku soo dhammaaday gar isku mid ah 0-0.
Si kastaba waxa ay tartankan kala soo laabteen iyagoo ka soo helay 1 Guul, 1 Guuldarro iyo 2 barbaro, waxaana ay ka soo hooyeen shan dhibcood, taasoo ku tusinaysa in khadkooda dhexe iyo daafacoodaba uu aad u heer sarreeyo marka loo eego dhanka weerarka oo ay ku yar tahay inay goolal dhaliyaan.
Waxa xulkeenna Soomaaliya ay barbaro 0-0 la galeen Jabuuti, waxa ay kulankii xigay guuldarro 2-0 kala kulmeen marti-geliyeyaasha tartanka ee Uganda, halka kulankoodii saddexaad ay guul 1-0 ka soo hooyeen Burundi, iyadoo kulankii galabta barbaro 0-0 la galay Eritrea.